တင်ဒါအသိပေးချက် - Ulukışla-Yenice စခန်းများကြားရှိ 1 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုအားဖြည့်ခြင်း - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD Led ဆီမီးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktırပျော်စေ »
အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 1
1 အမှတ် 4734 အပိုဒ်လေလံနေဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အာူး 19 အမှတ်အကြားတည်ရှိသောUlukışla Yenice စခန်းများ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
KN: 2019 / 467201
က) အမည်: 1 အကြားတည်ရှိသောUlukışla Yenice စခန်းများအမှတ်အာူးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
592,00 MT ။ အဖွင့်အပေါက် Injection, Injection အောင်တန်ချိန် 392,108, 3.342,5 M2 GYPSUM အင်္ဂတေ
ဂ) လုပ်ရမည် / Place အပ် station ကြားမှာ Silver-ÇİFTEHAN
ဃ) ကာလ / Delivery Date: 90 ပေးပို့တည်နေရာ (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းမှ။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 14.10.2019 - 10: 00
ခ) တင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ၏အရပ်ဌာန (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်): TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးsalünelလုပျငနျးကြမ်းပြင်yaptırılacaktıro: 1 Seyhan / ADANA
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 37 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့ 26 / 09 / 2019 အဆိုပါ 37 ADA TCDD အကြားတည်ရှိသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအာူးUlukışla Yenice စခန်းများအမှတ်6။ ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာUlukışla Yenice စခန်းများ 37 အမှတ် 4734 အပိုဒ်လေလံနေဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အာူး 19 အမှတ်အကြားတည်ရှိသည်။ KN: နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည် 2019 / 467248 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) အမည်: TCDD ADANA6။ ဒေသန္တရရုံးခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi Kurtulus ရပ်ကွက်အတွင်း 01120 SEYHAN Seyhan / ADANA ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့် e-လက်မှတ်မြင်နိုင်ပါသည် ...
အာူး 1 အမှတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု